Olona roa no maty, roa naratra vokatr'ilay fitifirana tany Arizona Amtrak
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Olona roa no maty, roa naratra vokatr'ilay fitifirana tany Arizona Amtrak
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ireo mpikambana ao amin'ny vondron'ny vondrom-paritry ny zava-mahadomelina isam-paritra miaraka amin'ireo manampahefana eo an-toerana sy any amin'ny federaly, dia nanao fizahana mahazatra tamin'ny fiaran-dalamby mijanona iray rehefa niseho ny fitifirana.
Ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna dia nanao fizahana mahazatra ny fiaran-dalamby Amtrak rehefa niseho ny fitifirana.
Lehilahy iray mpampihatra lalàna ary ahiahiana ho nitifitra no maty voatifitra tao amin'ny garan-dalamby Tucson.
Tsy nisy ny maty na naratra teo amin'ireo mpandeha lamasinina 137 sy ireo ekipa mpiasan'ny lamasinina 11.
Fitifirana tao anaty fiaran-dalamby Amtrak no nijanona teo amin'ny gara iray Arizona no namoy ny ain'ny olona ary roa naratra.
Nidina tao amin'ny gara iray any afovoan-tanànan'i Tucson ireo tompon'andraikitra ambany fampiharana ka niditra amina fiaran-dalamby amtrak any New Orleans avy any Los Angeles mba hanao fizahana mahazatra ny basy, rongony ary vola tsy ara-dalàna.
Nifanena tamina olona roa tao amin'ny ambaratonga faharoa amin'ny fiaran-dalamby ireo manamboninahitra mpampihatra lalàna ary nanandrana nisambotra ny iray tamin'izy ireo, raha namoaka basy poleta ilay olon-dratsy ary nitifitra.
Mpiasa iray mpampihatra fanafody (DEA) no maty voatifitra, ary mpandraharaha iray hafa kosa naratra ary naratra mafy. Polisy Tucson iray izay nirohotra nanampy rehefa nahare ny fitifirana dia naratra ihany koa, saingy tsy salama tsara.
Rehefa avy nifanakalo basy tamin'ireo manamboninahitra izy, dia nanakan-tena tao anaty trano fandroana fiarandalamby ilay nitifitra. Farany, tapa-kevitra ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna fa efa maty ilay olona ahiahiana tao amin'ny trano fidiovana. Tsy fantatra mazava amin'izao fotoana izao raha nitifitra azy ireo agents na namono tena ny tenany.
Tsy nisy ny naratra tamin'ireo mpandeha 137 sy ireo mpiasa 11 tao amin'ny Amtrak fiarandalamby izay nafindra toerana tamin'ny gara.
Ilay voasambotra voalohany voatazona am-piandohana dia mbola notazomin'ny polisy. Tsy misy olona ahiahiana ho hitan'ny manampahefana mpampihatra lalàna.